Home EGO AFRICAN FOOTBALL Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma
Emelitere ikpeazụ March 4, 2018
LB na-egosi Full Story of a Football Bull onye onye aha ya kacha mara amara; "Ndị Nwunye Ahụ". Foto Victor Wanyama nke anyị bụ Victor na-eme ka ị nweta nkọwa zuru ezu banyere ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ndị na-amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere akụkọ ihe mere eme ya dị ka Kenyan mbụ na-egosi na Premier League, ma ole na ole tụlee Victor Wanyama's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Oge mmalite
Aha ya bu Victor Mugubi Wanyama. A mụrụ ya n'ụbọchị 25th nke June 1991 na Nairobi, Kenya. A mụrụ ya na ndị nne na nna dara ogbenye, (Mr na Mrs Wanyama) bụ ndị mesịrị nweta ohere n'egwuregwu.
N'agbanyegh i na nwatakiri nmalite nmalite, Victor mgbe o tolitere bu nwa ntakiri nke n'eme Afrika "Cha na na na" aKA "Mama na Papa Na-egwu" dị ka ndị enyi ya bụ nwata. Ọ gafere ọtụtụ ihe isi ike. N'ụzọ doro anya, a chụgara Victor n'ụlọ maka ụgwọ ụlọ akwụkwọ na mgbe ụfọdụ, ọ ga-eri nri ruo ọtụtụ ụbọchị.
N'ịgbalị ịlanarị ihe ọjọọ ndị ahụ, ọ malitere ịkwa ụja site n'inwe obere ihe iji chebe ahụ na mkpụrụ obi. Mgbe ụfọdụ n'okporo ámá, ọ ga-ahụ ndị omempụ ndị òtù ndị uweojii Kenyan na-achụ.
Echiche nke football bịara mgbe a na-ele ya na Patrick Viera nke ọma na-egosi na ọ na-egosi na ọ bụ egwuregwu. Nke a bịakwara mgbe nwanne ya nwoke nke okenye na ndị na-egwu egwuregwu McDonald Mariga gwara ya ka ọ gbaa bọl. N'ịchọta na ọ na - emepe ụdị yiri nke a wuru Patrick Viera nke bụ n'azụ n'etiti ndị Kenyans, Victor kpebiri inye football ka ya na nne na nna ya na-akwado ya n'agbanyeghi na ọ ghachaa gụchaa akwụkwọ ya. N'agbanyeghị na nwanne ya nwoke nke mbụ na-abanye n'egwuregwu football, ndị mụrụ ya kwenyere na ọrụ enweghị ọdịnihu na nkwa na mba ahụ.
Mgbe Wanyama natara ndụmọdụ site na ndi nne na nna ya na nkwado ego nke nwanne ya nwoke gara n'ihu na Kamukunji High School, nke na-eme ka otu egwuregwu nwee ọganihu. Mgbe ọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ya na JMJ Academy na-egwuri egwu ruo afọ atọ n'oge ahụ ọ bịakwara na Nairobi City Stars na Naijiria.
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Ihe Ebube
Onye ọrụ ebube mbụ bịara n'ezinụlọ ya mgbe ndị okenye Swedish Wessama McDonald Mariga hụrụ ndị na-akpọ Swedish ndị na-akpọ ya ka ha kpọọ Helsingborg Họọntị Swedish. McDonald nwere ụdị nkwakọba ihe yiri nwanne ya nwoke, Victor na ụlọ ọrụ Swedish ha hụrụ ya n'anya. N'okpuru ebe a bụ ọdịiche dị n'agbata Victor (n'aka ekpe) na nnukwu nwanne ya (nke a nọ n'aka nri).
Mgbe ọ chọpụtara na ọ dịghị onye na-anọchite anya Mc Donald, mgbe a kọkwara ya banyere Victor Wanyama nwere ike ịlaghachi na Kenya, ha zigara ndị nledo ka ha bịa kpọpụta ya na Kenya.
Victor Wanyama nke mbụ kwagara Europe bịara na 2007 mgbe ọ sonyeere Helsingborg Helshorg na 2007 ebe nwanne ya nwoke, McDonald Mariga na-egwu bọl. Mgbe nwa nwanne ya nwoke McDonald Mariga pụọ Serie A n'akụkụ Parma na 2008, Wanyama laghachi Kenya maka ntakịrị ezumike. N'ime oge a, a na-ebute ya nye Beerschot AC nke Belgian League. Ọ nọrọ ebe ahụ maka oge abụọ tupu ya agafee ndị Katọlik, Celtics.
Wanyama bịarutere Celt dị ka ihe a na-amaghị ama. Ndi otu ndi mmadu na-agha osisi n'oge gara aga site n'iwebata 'ndi mmadu' ndi kwesiri inye ihe ndi ozo ma tinye egwu n'ime ndi mmegide.
N'ịbụ ndị na-egbu ala na-agba ọsọ, Wanyama bịara na Celt squad nke ndị midfielders na-atụbiga anya ókè na ụfọdụ na-eche ihe kpatara eji zụta ya. Site na mbido, o nyere iwu ka ọ bụrụ na ọ na-aga na nke a na-ahụkarị. Mgbe ọtụtụ nkọwapụ na nkwarụ gara aga na okwu, na 11 July 2013, Wanyama bịanyere aka na Southampton na Premier League maka ụgwọ a sịrị na ọ bụ £ 12.5, eme ka ọ bụrụ onye mbụ Kenyan mgbe ọ bụla na-egwuri egwu na Premier League. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Ndụ mmekọrịta
Victor Wanyama bụ nwoke na-ekwenye n'ezie ma mara ebe ọ ga-ahụ ịhụnanya.
Kenya dum anabatala nkwata n'etiti onye na etiti Midia na nke Kenyan bụ Tracy Macniven. Dị ka a na-ekwukarị, ma ndị hụrụ ya n'anya bụ egwuregwu zuru oke maka ibe ha.
Tracy bụ nwanyị mara mma. Ọ bụ ihe nlereanya maka "Ntinye Aka Nlekọta" nke na-emekọ ntutu na ntutu. Ọ na-eziga foto ya na ndị na-ama egwuregwu. Ihe ndị na-esote na-esetịpụ ịkọwa izu ike.
Nkwupụta site n'aka ndị agbakwunyere ha gụnyere otu nke kwadoro mmekọrịta ha kemgbe ihe karịrị otu afọ na nke ọzọ nke gbara ha ume "Lụọ di ma ọ bụ nwunye" si "Unu bụ ezigbo di na nwunye a kemgbe otu afọ ugbu a!" Ọ bụ naanị oge tupu Victor akwụsị.
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Personal Life
Victor Wanyanma nwere àgwà ndị a n'àgwà ya.
Ike Victor Wanyama: Ọ dị ike, nwee obi ike, nke nwere ọgụgụ isi, onye na-eguzosi ike n'ihe, nke mmetụta uche, onye nwere ọmịiko, nke na-ekwenye ekwenye.
Ahụhụ Victor Wanyama: Ọ nwere ike ịbụ Moody, enweghị atụ na enyo.
Ihe Victor Wanyama nwere mmasị: Ọ na-amasị PlayStation, Na-eri Chicken, ndụ a na-apụ apụ, goofu, ihe omume ntụrụndụ nke ụlọ, izu ike nso ma ọ bụ na mmiri, na-enyere ndị a hụrụ n'anya, ezigbo nri na ndị enyi
Ihe Wanyama achọghị: Ndị mba ọzọ, na-ekiri ihe nkiri, nkatọ ọ bụla nke nne ya ma na-ekpughe ndụ onwe onye
Na nchịkọta, Wanyama dị omimi na mmetụta. O nwere ike inwe ọmịiko ma nwee mmasị n'ebe ndị ọ nọ nso. Wanyama na-eguzosi ike n'ihe nye ala nna ya nke hụrụ ya na nwa ya n'anya.
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Ezinụlọ
Ná mmalite, ndị mụrụ ya adịghị mma. Akụkọ ha gbanwere mgbe ụmụ ha malitere ime ya na Europe. N'ihi ya, ha ghọrọ ezinụlọ na-egwu egwuregwu. Mgbe nwanne Victor McDonald Mariga bụkwa onye mmeri, ndị ụmụnne ya ndị nwoke Thomas na Sylvester Wanyama bụkwa ndị na-agba ụkwụ na Premier League nke Kenyan dị ka oge ederede.
N'ụzọ dị ịtụnanya, nna Victor Wanyama, Noa Wanyama (nke dị n'okpuru ebe a), bụbu ndị na-agba ọsọ maka AFC Leopards na 1980s. Noa emeghị ya n'egwuregwu football.
Noa na-ele onye ogbenye anya na-eme ka ọ megbuo ya site n'aka ndị ọrụ nchekwa n'oge enyi enyi Kenya na DR Congo.
SISTER NA NNA: Nwanne nwanne Wanyama Mercy abughi onye na-eme egwuregwu basketball na USA. Wanyama hụrụ mama ya n'anya nke ukwuu. Ọ na-ewere ya dị ka ihe kachasị mma nke meworo ya n'oge ndụ ya. N'okpuru bụ foto nke nne na nwanne Victor Wanyama.
NNE: N'ịbụ ndị site na nhụjuanya na-adịgide adịgide emeela ka ọ daa mbà n'oge ndị na-adịbeghị anya, mbụ McDonald Mariga bụ onye na-ahụkarị mba Kenya na-enwe obi ụtọ dị ukwuu na ịrị elu nwanne ya nwoke bụ Victor Wanyama.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụ ezie na ọrụ Mariga abanyelarị na bọlbụ nke Ịtali, Wanyama na-enwe obi ụtọ na ọ bụ egwuregwu kacha mma na England. Mariga bụ nwanne na-ahụ n'anya. N'okwu ya banyere ezinụlọ ya ...
"Ezinụlọ anyị dị nnọọ nso. Nne m na nna m mere ka anyị nọrọ nso, " Mariga kwuru. "Na-etolite, ha kwuru, sị, 'Enwere m enyemaka, nwa m nwoke, ọtụtụ'. Anyị ga-egwu bọl aka na mgbe akwụkwọ, M ga-agwụcha mbụ ma chere Victor ka anyị wee laa n'ụlọ - ihe ndị dị otú a. Mgbe ụfọdụ m ga-egwu egwu, m ga-ahụ onye na-agba nwanne m nwoke aka. Mgbe ọ mere, M obi ọjọọ na mgbe ụfọdụ ịlụ ọgụ iji kwụsị ya, " ME gosipụtakwara ihe ndị ọzọ na-egosi na ọ bụ onye nlekọta nwanne ya. Ọ bụ ihe karịrị afọ iri kemgbe Mariga buru Wansama n'okpuru nku ya.
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Mkpesa Ntugharị Street
Oge ụfọdụ gara aga, a kwanyere Wanyama ùgwù na Tanzania mgbe e degharịrị otu okporo ámá n'azụ ya na Dar es Salaam.
Otú ọ dị, ịgagharị, esemokwu esemokwu mgbe a kwaturu aha ogbi ahụ nke na-akpọ aha ya.
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Onyinye na-amasị
"The mmetụta m nwetara mgbe ihe mgbaru ọsọ megide Barcelona bụ nnọọ ekweghị ekwe! Ahụtụbeghị m ụdị ihe a na ndụ m. Ọ ka mma karịa mmekọahụ. Anyị emeghị ememe ahụ n'ụzọ ọ bụla. Ana m aṅụ ihe ọṅụṅụ oroma, nke ahụ zuru oke. "
Wanyama na akwụkwọ akụkọ Belgian Het Nieuwsblad mgbe 2-1 meriri na Barcelona (o meriri ihe mgbaru ọsọ) (Nov 2012)
"Emere m mkpebi ziri ezi iji soro Celtic. Ha bụ ụlọ ezinụlọ, ebe m nwere ike ịzụlite n'ụzọ kachasị mma. Enwere m obi ụtọ na Celtic. "
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Iwe
Victor Wanyama mgbe ụfọdụ enweghi ọgụgụ isi ịmara mgbe ọ ga-eme ihe na-acha uhie uhie / acha odo odo karịsịa na mpaghara iwe iwe.
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Ozi Ka Ụmụ Kenyan
Jehova nwekwara ozi maka ụmụaka ọ bụla na-atụ nrọ maka ịrị elu yiri nke a. O kwukwara, sị: "Ugbu a, ọtụtụ ụmụaka ndị ọzọ na-ekiri Premier League na TV na-enwe olileanya na ha nwere ike ịnọ ebe a mgbe ha tolitere. Echere m na m setịpụrụ ezi ihe nlereanya ma gosi na ọ nwere ike ime. Mgbe m na-aga ebe ahụ, m na-agba mbọ ịgba ụmụaka ume ma gwa ha ka ha kwere na-arụsi ọrụ ike ka nrọ ha weere na Premier League nwere ike ime. Ha kwesịrị bgi onwe gi dika ihe obula nwere ike ime. "
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma: Onye omee
Na 2015, Wanyama keere òkè na mmepụta obere ihe nkiri banyere bọl na Kenya Nwa Mdudu, ederede ma na-eduzi site na onye na-eme ihe nkiri Ella Smith.
Ọzọkwa, ọ bụ onye na-amalite ihe nkiri na obere ihe nkiri nke "Ọdụm nke Muthurwa". Nke a bụ ihe nkiri na-akpali akpali na njem ịgba ọsọ ya site na ebe a na-egwu egwuregwu egwuregwu egwuregwu.
Na nso nso a, Wanyama nwere soro n'ime mmepụta obere ihe nkiri banyere bọl na Kenya nke a na-akpọ Mdudu Boy, nke e dere ma dezie omee Ella Smith.
Mgbe ọ nọ na Celtic FC, Wanyama kpaliri Celtic Charity Fund, bụ ogwe aka nke Celtic FC ịga Kenya. Ọrụ ebere ahụ na-agba mbọ ịkwado mmetụta mgbapụta ọbara na Africa.
Ọ na-atụkwa anya njem ya site ná mpụga Nairobi ka ọ bụrụ na ụmụaka ndị ọzọ na-agba bọl na-aga.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Victor Wanyama Childhood Story tinyere akụkọ eziokwu ndị dị egwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Felix Oino November 21, 2018 Na 2: 21 pm
Ikwu: Wanyama bụ ezigbo onye nna ukwu na anyị Kenyans bụ ndị na-akwado ya. Jaa Blez Ya ka Ọ Na - akpali Anyị Site Gvng Anyị Nkwado Nkwado 2wadz Rchng Him.Congratz Bro Vicky.2ko Nyuma Yako Sie Mayouthz Wa Kenya.Kp On Kutufungulia Njia Wth Tym Tuunde Kenya Ndogo Ktk Mji Wa Uingereza.
Bendict lando June 23, 2019 Na 7: 05 pm
Ekele Wanyama maka ịchụ onwe gị n'àjà maka mba anyị dị elu Wanyama